Ngubani uNgqongqoshe Wezokuvakasha Omusha wase-Iran uMhlonishwa. Kuboshwe u-Ezatullah Zarghami
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Izindaba ze-Iran Breaking » Ngubani uNgqongqoshe Wezokuvakasha Omusha wase-Iran uMhlonishwa. Kuboshwe u-Ezatullah Zarghami
Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Amasiko • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • Izindaba ze-Iran Breaking • Izindaba • Abantu • Ukwakha kabusha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
U-Ezzatollah Zarghami, uNgqongqoshe Wezokuvakasha e-Iran Ngokuzithoba: Khamenei.ir -
UMongameli omusha we-Iran uqoke uMhlonishwa. USeyed Ezatullah Zarghami njengoNgqongqoshe omusha Wezamagugu Amasiko Nezokuvakasha. UbeyiPhini likaNgqongqoshe Wezamasiko noMnyango WamaSulumane kanjalo noMnyango Wezokuvikela ngaphambi kokuba abambe isikhundla sokuba yinhloko ye-Islamic Republic of Iran Broadcasting kusuka ngo-2004 kuya ku-2014.
U-Ebrahim Raisi, umengameli omusha we-Islamic Republic of Iran, waqoka iKhabhinethi yakhe ngo-Agasti 8. Iphalamende kuzofanele ligunyaze wonke amalungu eKhabhinethi aqokiwe.
UMnyango Wezamasiko Nezokuvakasha Wase-Iran uzoba noMhlonishwa. USeyed Ezatullah Zarghami oqokwe njengoNgqongqoshe omusha.
Ngo-2018 i-Iran yayinezivakashi ezingaba yizigidi eziyi-8 zakwamanye amazwe.
I-Iran ingenye yezimpucuko ezindala kakhulu emhlabeni futhi ibiphakathi kwemiphakathi ecabanga kakhulu futhi eyinkimbinkimbi kakhulu kusukela ekuqaleni. Kunezici zempucuko yase-Iran, ngandlela thile, ezithinte cishe wonke umuntu emhlabeni. Kepha indaba yokuthi lokho kwenzeka kanjani, nokubaluleka okuphelele kwalawo mathonya, imvamisa ayaziwa futhi ayikhohliwe.
Inhlangano Yezokuvakasha Nezokuvakasha e-Iran ichaza ezokuvakasha ziye e-Iran ngokuthi iTravel to IRAN. I-Persia, iZwe lezinkathi ezine zomlando ocebile nonemibala, izikhumbuzo ezingenakubalwa, izihambi zase-Iranian nokudla okumnandi.
Tubukhosi bethu in Iran kwehlukile, ukuhlinzeka ngemisebenzi ehlukahlukene kusuka ekuhambeni izintaba nokushushuluza ezintabeni zase-Alborz naseZagros, kuya emaholidini olwandle yiPersian Gulf.
I-Iran ishayeke kakhulu yi-COVID-19 kanjalo nemboni yayo yezokuvakasha nezokuvakasha.
Imboni yezokuvakasha e-Iran ilahlekelwe yimali engaba yizigidigidi ezingama-320 (amaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-7.6 ngesilinganiso sokushintshana esisemthethweni samarandi angama-42,000 ngedola) selokhu kwaqubuka ubhadane lwe-coronavirus, kubika i-ISNA ngoLwesibili.
Lesi sifo sesicekele phansi imisebenzi engaphezu kuka-44,000 XNUMX emkhakheni wezokuvakasha owawusanda kuba mncane wezwe, kusho umbiko.
Ngenxa yokugqashuka kwe-coronavirus e-Iran kanye nokuntuleka kwemisebenzi okwalandela nokulahleka kwezezimali, izindawo zokuhlala zahlupheka kakhulu. Lezi zibalo zihlanganisa isikhathi esiphakathi kukaFebhuwari 2020 nentwasahlobo ka-2021.
Izikhungo zokuhlala zithathe izigidigidi ezingama-280 trillion ($ 6.6 billion) ezitholwe yileli gciwane, kuyilapho abasebenzi abangaphezu kuka-21,000 kulezi zikhungo belahlekelwe yimisebenzi ngalesi sikhathi esishiwo.
Ama-ejensi wezokuvakasha abe yiqembu lesibili elithinteke kakhulu embonini yezokuvakasha, elinamarandi angaphezu kwezigidigidi eziyishumi (ama- $ 10 million) omonakalo nabantu abangaphezu kuka-238 abangasebenzi selokhu kwaqubuka lesi sifo.
Mayelana nokulahleka kwemisebenzi nokulahleka kwezezimali, izakhiwo zezokuvakasha, ama-eco-lodges, kanye nama-guides guides nakho kuphakathi kwamaqembu athinteke kakhulu embonini yezokuvakasha.
Ubani yena Hon. Sayyid Ezzatollah Zargham, ungqongqoshe omusha wezokuvakasha we-Islamic Republic of Iran?